သင် ဘာကြောင့် iPhone ကို မဝယ်သင့် သလဲ ? -
သင် ဘာကြောင့် iPhone ကို မဝယ်သင့် သလဲ ?
နှစ်စဉ် 10 သိန်းကျော် ကနေစတယ့် iPhone series အသစ်တွေ သိန်း ၃၀ လောက်မှ ကောင်းကောင်း ရမယ့် MacBook တစ်ခု ၃-၄ သိန်းရှိနေတယ့် ကြိုးမယ့် နားကြပ် တစ်စုံရယ် subscriptions တွေမပါ ရင် အသက်မရှိ သလို ဖြစ်နေတယ့် Apple ရဲ့ Service အထွေထွေ
ကျွန်တော်ကတော့ Kaung Myat Phone Kyaw ပါ iOS Banker Myanmar မှ Admin တစ်ဦးပါပဲ
ဒီနေ့ ကျွန်တော် သိုင်းလောက ရဲ့ သိပ်ကို ရှုပ်ထွေး လှတယ့် ဆောင်းပါး တစ်ခုကို ရေးပါမယ် “သင် ဘာလို့ iPhone ကို မဝယ်သင့် သလဲ” ဆိုတာပါပဲ (ပထမဦး စွာ ဤဆောင်းပါး မှာ အခြား OS နဲ့ ဆက်စပ်တယ့် အကြောင်း အရာမျိုးများ ပါရှိမည် လုံးလုံး မဟုတ်ပါ)
သင် ရောက်ရှိ နေတာ iOS Banker Myanmar ပါ ဒီမှာ Apple နဲ့ သက်ဆိုင်တာပဲ ရှိပါမယ် Okay 👌 တယ် ဆိုရင် စလိုက် ရအောင်
(1) iPhone တွေက စျေးကြီးပါတယ်
မည်သော် အခါမှ Apple ဟာ Cheap iPhone နဲ့ Budget iPhone ဆိုသည် ထုတ်လုပ် ခြင်း မရှိခဲ့ပါဖူး “အဲ့လို မပြောပါနဲ့ SE2ထွက်တယ်မယ် မဟုတ်လား” မေးစရာ ရှိပါမယ် $450 ဝန်းကျင် ဒီမှာ 8-9 သိန်း ဖြစ်လာနိုင်တယ့် iPhone SE2(ခ)9က စျေးချို သတယ့် လား ပြန်စဉ်းစား ကြည့်ပါ ဒါပေမယ့် ဒါပေမယ့် ပေါ့လေ 5C , SE , SE2 (o)9ဟာ Affordable iPhone ဆိုတာ တော့ မမှားပါဖူး
လက်ရှိ iPhone 11 Series မှာ iPhone 11 ဆိုရင် Less expensive ပဲလေ အဲ့ဒီတော့ အဖြေက ရှင်းပါတယ် ပိုက်ဆံမရှိရင် iPhone မကိုင်ပါနဲ့ ၄-၅ နှစ်ကြာ Ch Refur တွေကိုင်ပြီး iPhone က error များတယ် မလာပါနဲ့ သင့်မှာ ငွေမပေါရင် iPhone က သင့်အတွက် မဟုတ်ပါဖူး Apple က သင့်အတွက် ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဖူး ကိုယ့် ရွေးချယ်မှုကတော့ ကိုယ့်ဟာ ကိုယ် ဆုံးဖြတ် လိုက်ပါ
(2) iPhone တွေက စည်းကမ်း ကြီးပါတယ်
iPhone ဆိုတာထက် Apple ကလို့ ပြောရင် ပိုမှန်ပါ လိမ့်မယ် Apple က သင့် ပိုက်ဆံနဲ့ ပေးပြီး ဝယ်ထားရတယ့် သင့်အပိုင် iPhone ပေါမှ ဘာလုပ် နိုင်တယ် ဘာက မလုပ်နိုင်ဖူး ဆိုတာ အပြည့်အဝ ထိန်းချုပ်ထား ပါတယ်
Apple က သူတို့ အလိုမရှိတယ့် Apps ကို သင့် iPhone ပေါမှာ installed ပြုလုပ်ခွင့် မပေးသလို အခြား ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် အများအပြားကိုလည်း ကန့်သက် ထားပါလိမ့်မယ် ဥပမာ- ကလေး ဆန်ဆန် Theme တွေ တစ်ရက် တစ်မျိုး Change တာကို ထည့် မပြောလိုပေမယ့် Built in apps တွေကို အခြား app တွေနဲ့ အစားထိုး အသုံးပြုခြင်းကို လုံးဝ ခွင့်မပြုတာမျိုး တွေထိရှိပါတယ် Camera ကို အသုံးပြုတယ့် အချိန် ရွေးချယ်စရာ Camera Apps တွေ မပေါလာတာမျိုး တွေ စသဖြင့်ပါ
(3) iPhone က ရိုရှင်းပေမယ့် မလွယ်ကူပါ
iPhone ဟာ သိပ်ကို ရိုးသားပြီး တစ်နည်း မဟုတ် နည်းနဲ့ ခက်ခဲနေပြန် တယ့် မိန်းကလေး တစ်ဦးနဲ့ တူပါတယ် သူ့ရဲ့ ရိုးရှင်းမှာ ကြောင့် သူဘာတွေ တွေး ဘာတွေစဉ်းစား နေတယ်ဆိုတာ မှန်းဆ သိနိုင်ပေမယ့် နီးစပ်အောင်က ခက်ခဲ နေပြန်ပါတယ် iPhone ဟာလည်း ဒီတိုင်းပဲ လို့ ကျွန်တော် မြင်မိပါတယ်
iPhone ဟာ All about simplicity & clarity ပါပဲ ရိုးရှင်းမှုနဲ့ သန့်ရှင်းမှုဟာ iPhone ရဲ့ အထင်ကရ တစ်ခုပါပဲ သင်ဟာ အခုချိန်ထိ သင့် iPhone ရဲ့ Music Library ထဲမှာ သီချင်း တစ်ပုဒ်မှ မရှိသေးဖူး ဆိုရင်တော့ သင်လည်း ဒီလို မိန်းကလေး နဲ့ ကြုံနေပါပြီ “Fighting” ပါ
Music Library ထဲကို သီချင်း သွင်းလိုက် ဖို့က နည်းလမ်း (၂) ခုပဲ ရှိပါမယ် ဝယ်မလား နဲ့ ဝယ်မလား ပါပဲ ဒီလိုပါ iTunes Store ကနေ စီချင်းတွေ ဝယ်တာ ဖြစ်စေ Subscription ဝယ်သုံးတာ ဖြစ်စေ လုပ်မလား Computer ဝယ်မလား ဆိုပါပဲ အဲ့ဒါကြောင့် အဖြေက “ကုန်မလား နဲ့ ကုန်မလား” ပါပဲ သက်က ဒါမျိုးတွေ အတွက် အဆင်သင့် မဖြစ်သေးဖူး ဆိုရင် iPhone ကလည်း သင့်အတွက် မဟုတ်သေးပါဖူး
(4) Apple ဟာ အမြဲ ခြေတစ်လှမ်း နောက်ကျလေ့ ရှိပါတယ်
နောက်ကျတယ် ဆိုတာထက် ဆုတ်တယ် ဆိုတာက ပိုပြီး နားသာပါတယ် စကားပုံတစ်ခု ရှိပါတယ် “ထိုးမယ့် ဆင် ခြေတစ်လှမ်း ဆုတ်ပါတယ်” ဆုတ်ရင်း ဆုတ်ရင်းနဲ့ စင်နောက် လိမ့်ကျသွား ရော် ဖြစ်မှာတော့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ အလားလာ မရှိပါဖူး ဘာလို့လဲ “Apple” မို့လို့ပါ
Apple ဟာ Feature တစ်ခုကို customer စီ မိတ်မဆက်ခင် အမြဲလိုလို အချိန်ယူ စမ်းသတ် လေ့ရှိတာကြောင့်ပဲ အချိန် နှောင်းရပါတယ် ဒီအချက် ကြောင့်ပဲ iPhone Users တွေဟာ Features အချို့နဲ့ အများ အပြားကိုပဲ နောက်ကျမှ ပဲ သုံးရလေ့ရှိပါတယ် ထို့ပြင် Apple ဟာ Customer requests တို့ interests တို့ကို ဖြည့်စီး မပေးပါဖူး Customers demand ကို ပဲ အလေးထားပါတယ်
Customer တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လောက် လိုခြင် လိုခြင် Apple က မပေးပါဖူး သူပေးတာက Customer ရဲ့ လိုအပ်ချက် ကိုပါပဲ Screen resolutions & Display size မှာပဲ ကြည့်ရင် သိသာနေပါပြီ Pixels များများ လိုခြင်ကြတယ် Display ကျယ် ကျယ် လိုခြင်ကြတယ် Apple က အချိန် အတော်ကြာတယ့် ထိမပေးခဲ့ပါဖူး တကယ် လိုအပ်နေတယ့် အချိန်မှာ ပေးခဲ့တာကို တော့ ကျေးဇူး တင်ရပါဦးမယ်
တကယ်လို့ သင်ဟာ သင့်ရဲ့ လိုအပ်ချက် ထက် လိုခြင်မှုကိုသာ စိတ်ဆန္ဒ တင်သူဆိုရင် iPhone ကသင့် အတွက် အဆင်သင့် မဖြစ်သေးပါဖူး
(5) iPhone တွေက Luxury Product တွေပါ
အမှန်တကယ် လိုအပ်မှု ပိုပေးရတယ့် ပစ္စည်း ဆိုရင် လွယ်လွယ် luxury အဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါတယ် luxury ရဲ့ အသက်က Brand reputation “brand image” ပါ Apple က ဘယ်တော့မှ သူ့ကိုယ်သူ ပြန်မသတ်ပါဖူး “လက်ရှိ 3D Touch & iTunes ကို kill ခဲ့တာကတော့ လိုအပ်ချက်ပေါ့”
iPhone တွေက အမှန်တကယ်ကို Overpricing ဖြစ်တယ် လို့ ခံစားရ စေပါတယ် ပေးရသလောက်နဲ့ ထိုက်တန်မှုကို ခံစားရတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် တစ်နည်း မဟုတ် တစ်နည်းကတော့ စျေးများတာပါပဲ Latest iPhone အမြင့်ဆုံး တစ်လုံးကို ပေးရမယ့် စျေးက သင့်အတွက် အလုပ်သေးသေး တစ်ခုကို အစပြုဖို့ ပထမဆုံး ရင်းနှီးမှု အတွက် လုံလောက်တယ့် ပမာဏ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကံမကောင်းစွာနဲ့ Luxury product တွေက လူတိုင်းအတွက် မဟုတ်ခဲ့ပါဖူး သင့်အတွက် မဆိုလိုတာလည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
iPhone မှာဆိုရင် သင်မလုပ်နိုင်တာ တွေ များကြီးပါ
(1) iPhone မှာ Widgets တွေက လုံးဝ customize မရပါဖူး
(2) iPhone မှာ ဆိုရင် သင်ရွေးစရာ Size ၃ မျိုးပဲ ရှိပါလိမ့်မယ်
(3) iPhone မှာ iPad လို Multitasking မရ ရှိနိုင်ပါ
(4) iPhone မှာ Storage တိုးသုံးဖို့ ခက်ခဲ ရှိပါ လိမ့်မယ်
(5) iPhone မှာ Charger & ကြိုးတွေ သင့် စိတ်ကြိုက် သုံးမရပါ
(6) iPhone ဆက်စပ် ပစ္စည်းတွေဟာ စျေးကြီး လှပါတယ်
(6) iPhone ရဲ့ Specs တွေဟာ paper ပေါမှာ အားနည်းပါတယ်
(7) iPhone တွေက Premium ထက် စျေးပိုများ နေလေ့ ရှိပါတယ်
(8) iPhone သုံးရင် Apple eco SYS မှာ ပိတ်မိ ပါလိမ့်မယ်
(9) iPhone သုံးရင် ဖုန်းဘေအပြင် $-balance လည်း ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
(10) iPhone သုံးရင် Computer တစ်လုံးဆိုတာ essential မဟုတ်ပေမယ့် Necessary ပါ
ယခု ကျွန်တော် ရေးသား ဖော်ပြခဲ့တာ တွေကတော့ “သင်ဘာကြောင့် iPhone တစ်လုံးကို မဝယ်သင့်တာလဲ” ဘာလို့ iPhone က သင့်အတွက် အဆင့်သင့် မဖြစ်သေး တာလဲ ဆိုတယ့် ကောက်နုတ်ချက် ကလေးတွေပါပဲ
တကယ်လို့ ဒီ ဆောင်းပါးလေး ကို သင်သဘော ကျတယ် ကြိုက်နှစ်သက်တယ် ဆိုရင် Like share တွေ Follow တွေနဲ့ အား ပေးသွားကြပါ နောက်တစ်ခု အနေနဲ့ “ဘာလို့ iPhone တစ်လုံးက သင့်အတွက် မရှိမဖြစ်လဲ” ဆိုတာလေးနဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါမယ်
ရေးသားသူ – Kaung Myat Phone Kyaw (iOS Banker Myanmar)
Previous iPhone6& iPhone6Plus တွေက ML ကို ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ဆော့ကစား နိုင်သလား